प्रदेश-७ – Page 11 – Halkaro
अछामको रामारोशनमा माअोवादी केन्द्र विजयी
प्रकाशित मिति : २०७४, १९ असार सोमबार
अछाम । जिल्लाको रामारोशन गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ । आइतबार राति सार्वजनिक भएको मतपरिणाम अनुसार नेकपा (एमाले) लाई ५६८ मतले पछि पार्दै माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भएका हुन् । अध्यक्ष पदमा विजयी भएका झंकर साउँदले ३४०२ मत ल्याए भने उपाध्यक्ष्मा पनि माओवादी केन्द्रकी सरस्वती रावलले ३२९० मत ल्याएर विजयी भइन । एमालेका […]
दिपायल सिलगढीमा एमाले विजयी, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पहिलो महिला मेयर बनिन् मञ्जु
प्रकाशित मिति : २०७४, १८ असार आईतवार
डोटी । जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा एमालले विजयी भएको छ । यहाँ एमालेकी मञ्जु मलासी विजयी भएकी हुन् । उनी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा विजयी हुने पहिलो महिला मेयर भएकी छन् । मलासी ४४१८ मत ल्याएर नगरपालिकाको मेयरमा विजयी भएकी हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका बाजीसिंह खड्का (विजय)ले ४१५२ मत ल्याएका छन् । उपमेयरमा […]
डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा काँग्रेस विजयी
डडेलधुरा । जिल्लाको परशुराम नगरपालिका कांग्रेसले जितेको छ । परशुराम नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका भीमबहादुर साउद विजयी बनेका हुन् । उनले ४६२९ मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी माअ‍ोवादी केन्द्रका शेरसिंह मालले ४१०२ मत ल्याए । उपमेयरमा कांग्रेसकी कलापती बोहरा ४२१३ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनी प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रकी बिमला महता ३६३८ मत ल्याइन् ।
कुन स्थानमा कसले जित ? अपडेट सूचीसहित
प्रकाशित मिति : २०७४, १८ असार आईतवार July 2, 2017
काठमाडौँ । दोस्रो चरणको निर्वाचन भएका स्थानीय तहको मतगणना जारी छ । एमालेले आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ । कांग्रेसले एमालेलाई कडा टक्कर दिइरहेको छ । तेस्रो स्थान सुरक्षित गरिरहेको छ माअोवादी केन्द्रले । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुर्इ र संघीय समाजवादी फोरमले एक स्थानीय तह जितेका छन् । नेकपा एमाले १. मैवाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २. […]
मतगणना विवादमा झडप प्रहरीले चलायो गोली
प्रकाशित मिति : २०७४, १७ असार शनिबार
कञ्चनपुर । मतपरिणामको विषयलाई लिएर तनाव उत्पन्न हुँदा जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकामा प्रहरी र असन्तुष्ट पक्षबीच झडप भएको छ । झडपमा प्रहरीले गोली चलाएको छ । झडपमा केही प्रहरी र केही आन्दोलनरत पक्ष घाइते भएको बताइएको छ । पूनर्वास नगरपालिका–१ मा फर्जी मत भेटिएको भन्दै नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले असन्तुष्टि जनाएपछि आज दिउँसोपछि मतगणना […]
१३६ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिकः कसले कहाँ जिते सूचिसहित
प्रकाशित मिति : २०७४, १७ असार शनिबार July 2, 2017
काठमाडौँ । दोस्रो चरणको निर्वाचन भएका स्थानीय तहको मतगणना जारी छ । एमालेले आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ । कांग्रेसले एमालेलाई कडा टक्कर दिइरहेको छ । तेस्रो स्थान सुरक्षित गरिरहेको छ माअोवादी केन्द्रले । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुर्इ र संघीय समाजवादी फोरमले एक स्थानीय तह जितेका छन् । एमालेले जितेका स्थानीय तहः १. मैवाखोला गाउँपालिका, […]
७ नं. प्रदेश ८८ मध्ये ४६ स्थानीय तहको नतिजा अायो, कसले कहाँ जिते सूचीसहित
काठमाडौँ । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको सात नं. प्रदेशमा ४६ वटा स्थानीय तहको मतपरिणाम अाएको छ । मत परिणाम अनुसार काँग्रेसले अग्रता लिएको छ । काँग्रेसले २१ स्थानमा जित हासिल गर्दा एमालेले २० स्थानमा जितेको छ भने ५ स्थानीय तहमा माअोवादी केन्द्रले जित हासिल गरेको छ । यहाँ ८८ वटा स्थानीय तह छन् […]
१०१ स्थानीय तहको नतिजाः कसले कहाँ जिते ?
प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्लामा माअोवादीले खोल्यो खाता
प्रकाशित मिति : २०७४, १६ असार शुक्रबार
डडेलधुरा । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा माओवादी केन्द्रले खाता खोलेको छ । जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिका प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका युवा नेता उमेश भट्ट ‘विकास’ निर्वाचित भएका छ । यसअघि डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका प्रमुखमा एमालेका विपिन ओझा विजयी भएका थिए । डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकामा कांग्रेसका बिरबहादुर गुरुङ अध्यक्षमा र ज्वाला बोगटी उपाध्यक्षमा विजयी भएका छन् ।
बाजुरामा एमालेलार्इ पहिलो खाताः पाण्डवगुफा गाउँपालिका अध्यक्षमा विजयी
बाजुरा । जिल्लाको पाण्डवगुफा गाँउपालिका एमालेका उम्मेदवार अध्यक्षमा विजयी भएका छन् । १४५१ मतका साथ एमाले कालीबहादुर शाही अध्यक्ष पदमा बिजयी भएका हुन् । उपाध्यक्षमा एमालेकै ऐना गिरीले १४९० मत ल्याएर विजयी भएकी छन् । प्रतिद्धन्दी काँग्रेसका अध्यक्षका उम्वार सुन्दर बिष्टले ९८९ उपाध्यका उम्मेद्धार तारा रोकाया ९८७ मत ल्याइन् ।